01-12 Novambra 2021 | Glasgow
Ampidino ny taratasin-toeranay
Famantarana ireo sakana karbaona manga manga honko
Miaro ny zon'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka
Mba hahafeno ny halehiben'ny fanamby, mino izahay fa tokony hisy hetsika lavitra ezaka amin'ny sehatra roa manan-danja amin'ny asantsika: Vahaolana mifototra amin'ny natiora izay mamerina sy miaro ny fonenan'ny karbaona manga ary jono salama izay miantoka ny zo eo an-toerana sy manome hery ny fitantanana eo an-toerana.
Nanolo-tena hizara ny fianarantsika izahay mba hahazoan'ny rehetra tombony, ary hampiantrano hetsika maromaro amin'ny COP26 azo jerena mivantana sy an-tserasera. Raha te hahalala bebe kokoa dia tsindrio ny rohy eto ambany.
Ny mpiara-miombon'antoka sy ny vondrom-piarahamonina BV miara-miasa amin'ny karbaona manga dia mitarika eran'izao tontolo izao. Natomboka ny iray amin'ireo tetikasa fiarovana honko karbônina manga voamarina voalohany eran-tany tamin'ny taona 2019. Ary nitarika ny lalana izahay hetsika karbaona manga izay mametraka ny fiarahamonina ho lohalaharana, mampandroso ny siansa ary mamokatra fitaovana sy fomba fiasa vaovao.
Lohalaharana amin’ny fiarovana ny zon’ny mpanjono amorontsiraka ihany koa izahay. Io no fototry ny asantsika ary fototry ny fanatsarana ny fitantanana, ny fampitomboana ny fivelomana eo an-toerana ary ny famerenana ny fiainana an-dranomasina.
Ny hetsika ataontsika amin'ny COP26
Alatsinainy 8 Novambra 2021 | 14:00-15:30 Glasgow
Sabotsy 6 Novambra 2021, 09:00 - 10:30, mivantana avy ao amin'ny Commonwealth Pavilion (Faritra Manga).
Jereo ny hetsika honko sy karbaona manga
Jereo ny hetsika ho avy trawling ambany sy tsy misy karbona
Mifankahita any amin'ny ranomasina amoron-tsiraka ireo kofehy roa amin'ny asa ataontsika ireo, izay ilàna ny fiarovana ny toeram-ponenan'ny karbaona be toy ny ahitra amin'ny voka-dratsin'ny sambo indostrialy mpanjono. Ny trawl ambany indrindra indrindra dia afaka manimba ny toeram-ponenan'ny fanambanin'ny ranomasina izay mitahiry karbaona be dia be, ka mamerina azy any an-dranomasina.
Manana varavarankely kely kokoa isika mba hisorohana ny fiovan'ny toetr'andro. Ireo no taonan'ny fanamboarana na fiatoana. Tsy afaka miandry isika hamaha ny krizy amin'ny toetr'andro.
Raha mila fanazavana fanampiny, na hihaona amin'ireo mpikambana ao amin'ny ekipanay any Glasgow, azafady Mifandraisa aminay.